ဒူဘိုင်းမြို့သည်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်။ - အလုပ်အကိုင် - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားလာခြင်း
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲ forward ပြုလုပ်ပေးဖို့ရှာဖွေနေနှင့် The အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေသတင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကမှတ်ပုံတင်ထားသောအဖွဲ့ဝင်များကို update ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်များ, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပို့စ်တင်နေကြသည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ဒူဘိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကို နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမြှင့်တင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အမြဲစော်ဘွားမြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲယူအေအီးလူနေမှုပုံစံ, ကျွမ်းကျင်သူများလမ်းညွှန်များ👳နှင့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစာဖတ်သူများများကိုရှာဖွေနေဘလော့ဂါများ၏ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ⭐⭐⭐⭐⭐အသင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဧည့်သည်များပေးနေကြသည်။
တောင်မှတဦးတည်းလူကြိုက်အများဆုံးဘောလီးဝုဒ်ကြယ် ရှာရွတ်ခန်း မိမိအမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက်ကြာ ဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ထိုသို့သူဒူဘိုင်းမှအခြားသူများအားဖိတျချေါထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အင်ဒီးယန်းမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်သူ့ကိုချစ်ကြတယ်။
ဒီတော့လိမ့်မည် သငျသညျ be ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည် ယူအေအီးသနည်း သငျသညျဒူဘိုင်းစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ် ခံစားချက်တွေကို အဆိုပါဘောလီးဝုဒ် Superstar စားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူ။ နှင့်သင့်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့, ကင်ပိန်းနှင့်ဤအစိုးရဆိုဒ်အားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားကြသည် ဒူဘိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း & စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းစျေးကွက်၏။ သငျသညျရုပ်ရှင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် !.
ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းအာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ထိုသို့အများစုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့၏တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ထောင့်၌တည်ရှိ၏။ ဒူဘိုင်းမြို့အင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်လူတို့အဘို့အလွန်လူသိများသည်။ အဖြစ်အားလုံးဥရောပနှင့်အမေရိကန်ဒူဘိုင်းကျော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားဧည့်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအသစ်ဧည့်သည်များအတွက်သူ့ရဲ့လူသိများတဲ့နွေးဧညျ့နှင့်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ရှိခြင်း။ ထို့အပြင် 7th စော်ဘွားမှာနေထိုင်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများ၏နေ့စဉ်အသစ်ကဧည့်သည်ကြိုဆိုနေကြသည်။ သူတို့ဒူဘိုင်းမြို့တော်သစ်ဧည့်သည်များရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှု၌အလွန်ရက်ရောသောကြောင့်။
ဒူဘိုင်းမြို့တှငျကြှနျုပျတို့ 356 ရက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရောင်ခြည်ရှိခြင်းနေကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ် Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းစွန့်ပစ် သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ရှိသည်နိုင်။ သင်တန်း၏, ဒူဘိုင်းဇိမ်ခံဟိုတယ်များနှင့်အတူလှပသောကမ်းခြေရှိခြင်း အကြီးမားဆုံးကုန်တိုက်ကြီးတွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ် 21st ရာစုဆွဲဆောင်မှုအတူ။ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတဦးလည်းရှိပါသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီမံကိန်းများကိုသန်းပေါင်းများစွာလက်ခံ၏။ ဤရွေ့ကား, စိတျထဲတှငျ, အပန်းဖြေနှင့်စီးပွားရေးဧည့်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့အတူ။
ဒေသခံငွေကြေးစနစ် dirham မဟုတ်ဘဲအမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ 3.87 အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးမှ AED 1 နှိုင်းယှဉ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှင်အလုံအလောက်ကောင်းလှ၏။ ကျော်လာနဲ့ဒူဘိုင်းရဲ့လူကဲ့သို့သောဒဏ်ခံလူမြိုးနှငျ့အခြို့သောအချိန်ဖြုန်းဖို့တစ်စမတ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်။
ယူအေအီးဖြစ်ပြီးနာမည်ကျော်တိုင်းပြည်အပေါင်းတို့နှင့်ဧည့်သည်များဤအရပ်ဌာနကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်နည်းပညာနှင့်အတူရှေ့ဆက်မယ့်ပုံကိုအံ့သြဖွယ်စော်ဘွားကြည့်ရှိသည်ဖို့ကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်။ သို့သော်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနေဆဲဒူဘိုင်းအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်လမ်းဖြစ်၏။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, စော်ဘွားခဲ့ဘယ်တော့မှသူကိုခရီးသွားဧည့်သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်များ၏ကြာချိန်များအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေး sensitivity ကိုတစ်ဦးအခြို့သောအဆင့်ကိုချမှတ်သင့်ပါတယ်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတှငျကြှနျုပျတို့ဥရောပနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းအစိုးရသောမင်းတို့ 1833 နှင့် Al Maktoum တော်ဝင်မိသားစုကတည်းကဤအရပ်ဌာနကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း ထိုအချိန်မှစ. ဒူဘိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစော်ဘွားဖှံ့ဖွိုးတိုးအောက်မှာအမြဲရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏ရှင်ဘုရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်မှုမန်နေဂျာဖွံ့ဖြိုးရန်တိုးတက်သောလမ်းကိုဦးဆောင်သည်။ ပြီးတော့ကတည်းကဒူဘိုင်းတစ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသများအတွက်စီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းသမိုင်း က 800 အတွက်ချောင်း၏နှုတ်တော်ထွက်မှာအခြေချနေထိုင်သည့် Maktoum မိသားစုတို့ကဦးဆောင်သည့်ဗာနိ yas အနွယ်, ၏ 1833 အဖွဲ့ဝင်များကျော်အစအဦးမှာပါ, အဲဒီလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်အစကတည်းကအာရဗီလူမြိုးအတှကျအတော်လေးခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါချောင်းသဘာဝဆိပ်ကမ်းကြီးနှင့်ဒူဘိုင်းမကြာမီငါးဖမ်း, ပုလဲနှင့်ပင်လယ်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်တစ်ဦးစင်တာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တီဗီထဲမှာမျက်မြင်အတိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသတစ်အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်စော်ဘွားများအတွက်မင်္ဂလာရှိခဲ့ပါသည်။ နယူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဒေသခံများဒူဘိုင်းစီးပွားရေး၏ကဏ္ဍအားလုံးတွင်တစ်လျှောက်လုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားမျက်မြင်ပါပြီ။ အဆိုပါ 7th အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအစိုးရကကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနှင့်အဆက်မပြတ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအတွက်အသက်ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကပင်ပိုမိုမြင့်မားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကကူညီကြောင်းပြောင်းလဲနေသောစည်းမျဉ်းများကြီးထွားခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးဘို့အဆင်သင့်စီးပွားဖြစ်ပါပဲ။ နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း extensionally ကျော်သွားနေကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီအတူတက်မနာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ account ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်အခါ။ သင်ပင်, စော်ဘွားနှင့်ကာတာနိုင်ငံကနေအခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ပါလိမ့်မယ် အိႏၵိယ။ ဒါကြောင့်သေချာသင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်စတင်မည်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ယူအေအီးအခြားကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပါ။